Jowhar.com : Somali Leader News - News: Dagaalo qasaare geystey oo ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Ceelbuur
April 24 2014 20:53:28
Dagaalo qasaare geystey oo ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Ceelbuur
Wararka ka imanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in dagaalo khasaare geystey ay ka dhaceen deegaano ku xeeran degmada Ceelbuur.
Dagaaladan oo u dhexeeyay ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo ururka Alshabaab ayaa la sheegay in dad tiradoodu ka badan toban ruux ay ku dhinteen iyadoo dagaaladuna ay ka dhaceen deegaano ku dhow dhow degmada Ceelbuur.
Iskahorimadyadana ka soo cusboonaaday gobolka Galguduud ayaa waxa uu ka bilowday markii ay ciidamada Alshabaab wadada u galeen gaadiid sahay u sidey ciidamada AMISOM ee ku sugan degmada Ceelbuur.
Afhyeenka howlgallada Al-shabaab, Sheekh C/casiis Abuu-muscab ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid culus ayna khasaare ku gaarsiiyeen ciidamada huwanta ah, isagoo aan sheegin khasaaraha dhankooda soo gaaray.
Dhinaca kale sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ciidamada Itoobiya kasoo gaaray dagaalka.
Dadka ku sii haray deegaandaa ku dhowdhow Ceelbuur ayaa soo sheegaya in dagaladan ay ahaayeen qaar la isu adeegsaday hubka culuculus uuna ahaa dagaal ka mid ah kuwii ugu xoogga badnaa ee ka dhaca deegaanada hoos yimaada degmada Ceelbuur.
0 Comments · 3054 Reads
Jowhar.com750,536 unique visits